Guta reAngel rinozivikanwa nemamiriro ekunze ane zuva uye vanozivikanwa muHollywood. Kushanyira Los Angeles? Pazasi pane runyorwa rwezvimbo dzekushanyira dziri remara kufambidzana hushamwari:
Inowanikwa mumoyo weHollywood, kukwira kwakawanda, kuratidzwa, uye zvinokwezva kuUniversal Studios ndizvo wiricheya kufambidzana. Iyo paki inopa vashanduri vemitauro yemasaini (mahara pasina muripo neinosvitsa svondo rimwe chete chiziviso) nemidziyo yekubatsira uye zvinyorwa zvinogona kuwanikwa paDeski Yehukama hwehukama pamusuwo wepamberi. Bhurocha rakajeka rine ruzivo rinogona kuwanikwa online uye paiye Guest Relations.
Click pano kune ruzivo nezve ruzivo rwekuwanika.
Iyo Getty Center iri wiricheya nzvimbo ine hushamwari kubva pakutanga kwerwendo rwekupinda mumuseum. Kubva pakupaka kwepasi pevhu kusvika kuchiteshi chetram, irwo rwendo rwakashata. Iwo ekumaodzanyemba akatarisana nemabalkoni ari kufambidzana kuona guta. Iyo zvinyoro nyoro yakatsetseka zig zag nzira inosanganisirwa muminda yavo. Iyo museum inopa wiricheya kuroja, kududzira mutauro wemasaini, uye anobatsira ekuteerera michina.
Iwe haugone kushanyira LA usina kushanyira inozivikanwa pier. Haisi chete pari yekuredza hove, zvakare ine nzvimbo yekuvaraidza, maresitorendi, uye zvitoro. Ita shuwa yekupaka padanho rekumhara pier kuti zvive nyore kuwana kune iyo pier.
Kana iwe uchitsvaga nzvimbo yekudyira nekutenga, iyo Grove ndipo paunoda kuve iwe. Zvitoro zvikuru zvine hurema- zvinobatsira madhoo. Iyo zvakare ine Varimi Musika, iri padhuze nepadhuze. Trolley yeGrove ine wiricheya simudza kuti utore vashanyi kuMusika wevarimi. Kupaka, paka paimba yekutanga yepaki yekumisikidza panowanikwa hurema. Wiricheya Rental anowanikwa kuConcierge Desk panzvimbo yekupaka.
5. Akwariyamu yePacific
Imwe yeiyo wiricheya nzvimbo dzakanaka muLos Angeles, wiricheya vashandisi vanogona kunakidzwa nekuona zvisikwa zvegungwa vasina kubuda mazviri wiricheya. Mawiricheya vakasununguka kuroja paInformation Center. Mamwe masevhisi akadai sekushanya kwekuteerera kune vashanyi mapofu uye makopi ezvinyorwa zvekuratidzira anowanikwa kune avo vasinganzwi kana vane hurema hwekusunga.
Click pano kune ruzivo nezve ruzivo rwekuwanika
Android Inowanikwa zvirinani kune Akaremara